Le nqubomgomo izofakwa ohlwini lwamasheya ngonyaka ka 2017 | Ezezimali Zomnotho
Lapho nje sekucacile ukungabaza okubalulekile mayelana nokuthi ngubani ozoba ngumengameli wezwe omusha, kuningi okungaziwa okusamele kuxazululwe emkhakheni wezepolitiki. Isiteji esiyinhloko kuzoba inhlabathi yaseYurophu. Kunoma ikuphi, kuzothatha isinqumo se- phawula ukuvela kwezimakethe zokulingana cishe kuzo zonke izimakethe zamasheya. Ngomqondo othile noma omunye, kuthinta imisebenzi ozoyenza kusukela ngoJanuwari.
Eminyakeni embalwa, izinqubo zokhetho zizokwenzeka emnothweni futhi zizonquma ukuthi ukunyakaza kwabo kuzoya kuphi. yesikhathi esifushane, esimaphakathi nesikhathi eside. Kulula ukuthi ubacabangele ukuze ukwazi ukwenza ifayela lakho le- ukulondoloza kuzo zonke izimo. Akumangalisi ukuthi, ngokuya ngeminyakazo yezepolitiki, ungalahlekelwa ama-euro amaningi endleleni. Kepha futhi thola inzuzo enkulu yemali uma wenza ngendlela efanele futhi ngokushesha okukhulu ekusebenzeni ezimakethe zezezimali.
Ipolitiki, kulokhu, izodlala indima ebaluleke kakhulu esikhathini esizayo sezimakethe zamasheya. Kuthinta kakhulu izimali zaseYurophu, kodwa futhi ngakolunye uhlangothi lolwandle, ngisho nasezindaweni ezikude kakhulu emhlabeni. Kuzoba yisimo esijabulisayo esingashiyi noma yimuphi umtshali zimali engenandaba. Ngemizwa enamandla yabathandi bemisebenzi yokuqagela. Lapho kulindeleka ukuguquguquka okuphawuleka kakhulu kwizibambiso ezisohlwini. Ngokushintshashintsha okuqhubekayo kwamanani abo.
1 Ezombusazwe: Ikhalenda Lokhetho
2 IJalimane, usuku olukhulu lokhetho lonyaka
3 IHolland nenye inhlolovo
4 Amacici nawo avela eSpain
5 Izeluleko eziyi-8 zalesi simo
Ezombusazwe: Ikhalenda Lokhetho
Kunabantu abathathu abaqokiwe okhethweni oluzokwenzeka ngonyaka ka-2017. Zonke zibaluleke kakhulu, hhayi kuphela ezimalini, kodwa nasekusindeni kwenkampani. I-European Union. Ngemiphumela yesibambiso ezimakethe ezingenakubalwa nezimpahla zezimali. Imali, izinsimbi eziyigugu, izinto zokusetshenziswa, njll. Kwamanye ala macala bazomela amathuba webhizinisi langempela, yize kwamanye bangahlupheka ezinyangeni ezizayo.
Umcimbi wokuqala wezokhetho uzokwenzeka eFrance. Ukhetho lukaMongameli lwaleli lizwe olubalulekile luzokwenzeka entwasahlobo. Uma kungenzeka ukuthi ophakanyiswayo weqembu lezepolitiki ovumela ukuphuma kwesikhala somnotho esivamile angakhuphuka abe namandla. Lesi simo, ngaphezu kokunye okushiwo, singaveza ukuzamazama komhlaba kuzo zonke izimakethe zamasheya. Hhayi ngeze, ingahle yehle isikhathi esiningi sonyaka futhi inwebeka nangesikhathi sayo. Ngakho-ke ukubaluleka kwalokhu kuqokwa okhethweni.
Izinto eziningi zisengozini, zezimali, ikakhulukazi i-euro. Kepha futhi yisibonelo somphakathi ongavulelekile ekusetshenzisweni komhlaba wonke komnotho njengalesi esenzeka kuze kube manje. Kuzoba usuku olubalulekile kuwe ukuvula noma ukuvala izikhundla ezimakethe zezezimali, kuya ngokuthi omunye noma omunye umphumela uyenzeka yini. Futhi, izikhwama zizohamba ukunikela ngokuqagela kwakho kuzinhlolovo ezenziwa phambilini.
IJalimane, usuku olukhulu lokhetho lonyaka
Ngokushesha ngemuva kwalokho, ngaphambi kokuqala kwekwindla, kuzobuye kwenziwe olunye ukhetho lomthetho olunqumayo. Ngokuqondile eJalimane injini yangempela ye-European Union. Ine, ngomehluko ongajwayelekile, isimo esifana nesomakhelwane bayo baseFrance. Ngaphandle kokungabaza, kuzoba umfutho ukuze izikhwama zikude nanoma yikuphi ukunyakaza kwe-lateral. Ungasebenzisa futhi lokhu kuqokwa kwezepolitiki ukwenza izimpahla zakho zinenzuzo ngokubheja kwezimakethe zamasheya ezifanele kakhulu nemiphumela. Vele, ungayenza ibe nenzuzo, kepha ngesizathu esifanayo, yenza lo nyaka ube yi-annus horribilis of equities.
Ngenzuzo yendima enamandla yethonya edlalwa yimakethe yamasheya yaseJalimane. Kulawo aseYurophu kunjalo, kepha naseNyakatho Melika noma e-Asia, ukubala izibonelo ezimbalwa. Kunoma ikuphi, kuzoba ngubani ozokhombisa iqhaza lemakethe yamasheya ngekota yokugcina yonyaka. Akufanele ikubambe emdlalweni ngoba imali yakho izoncika empendulweni enikezwe abavoti baseJalimane.
Lolu khetho olusenkabeni yeYurophu lubaluleke kakhulu kangangoba abekho abahlaziyi bezimakethe abambalwa abakhomba ukuthi yona kanye le ndlela yokwakha yaseYurophu iyasetshenziswa, kuya ngemiphumela yokuvota. Enye yezimpahla zezimali ezizojabula kakhulu ngalesi sinqumo kuzoba yi-euro. Kwangathi yenza ukunyakaza okunodlame kakhulu kusilinganiso sakho. Futhi uma ubukhali ekuphenduleni ungakusebenzisa ngokunenzuzo yezintshisekelo zakho.
IHolland nenye inhlolovo
Ngaphandle kwesisindo sayo esiphansi emnothweni wamazwe omhlaba, umthelela wayo uzoba ngaphezulu kokumangazayo. Ngesizathu esifanayo nakubalingani bayo baseYurophu bangaphambilini. Ngokunye okungaphezu kwangempela ukuthi a thintana nabantu ukuze bathathe isinqumo uma ufuna ukushiya i-European Union, njengoba iGreat Britain yenze phakathi nalokhu kuvivinya umzimba. Akumangalisi ukuthi amehlo ezinkulungwane nezinkulungwane zabatshalizimali emhlabeni wonke azobe ebuka le nqubo yentando yeningi ezweni lama-tulips.
Akukaze kube namazwe amaningi kangako aqaphele okwenziwa abavoti abambalwa kakhulu. Zingaba ukuphela kwe-adventure yamanje yaseYurophu. Kwanele ukukhumbula ukuthi iqembu elisekela lesi sikhundla okwamanje lihola izinqumo zokhetho. Kumele kukhunjulwe ukuthi iNetherlands ibingomunye wabanduleli balo mqondo wobunye baseYurophu. Kepha ngasikhathi sinye omunye wabokuqala futhi ukuwushiya. Akufanelekile ukuthi ubukele phansi leli lizwe elincane ngoba kungakunika isimanga esibi ebudlelwaneni bakho nezimali.
Amacici nawo avela eSpain
Futhi akufanele ukhohlwe okungenzeka kwenzeke kwezepolitiki ezweni lethu kusukela ngoJanuwari. Akumangalisi ukuthi ukhetho jikelele lungabanjwa nganoma yisiphi isikhathi. Mayelana nokungenzeka uhulumeni wamanje uyasekela. Kungaba okunye ukungaqiniseki okungafinyelela ezimakethe zezezimali. futhi baya… Ukuthi kungathatha imakethe yamasheya yaseSpain ekukhuphukeni okungakaze kubonwe eminyakeni yamuva. Kulesi simo, kungaba lula kakhulu ukubanjwa unemali ephelele. Ngale ndlela, lahla isijeziso esingadingekile.
Lokhu kungabaza, noma kunjalo, kuzoba khona unyaka wonke ngenkemba yamaDamócles engasikala isisindo sokuma kukazwelonke. Kulokhu, ngeke uze ukhethe kodwa ukusesha ukuphephela kwezinye izimpahla zezimali. Enye yezinto ezinconywe kakhulu igolide. Uzothola imali evela kubatshalizimali abaningi, abakhulu nabancane, abafuna ukunika uzinzo kutshalomali lwabo ngezimpahla eziphephe ngalezi zikhathi ezikhetheke kakhulu emkhakheni wemakethe yamasheya.
Kuzoba nezinye izinqubo zokhetho eYurophu, okuthi, okubaluleke kakhulu ekuguqulweni kwamasheya, kungafinyeleli ezingeni lalabo abachazwe ngenhla. Kunoma ikuphi, zizokusiza uqonde kancane lapho ukuhamba kwalezi zinyanga eziyishumi nambili kungaqhamuka khona. Kwezinye izimo, nanjengesibonakaliso sesixwayiso salokho okungavela eJalimane noma eFrance. Kuzoba unyaka lapho ezombusazwe zizoba nesisindo esikhulu esithile emnothweni.
Ngokubaluleka okukhulu ku- ezinye izindawo zomhlaba. Ukusuka eChina kuye eBrazil, kudlula eRussia noma eMiddle East. Njengomphumela walesi simo esiyinkimbinkimbi kakhulu esethulwe unyaka we-2017, ngeke ukwazi ukushiya imali oyilondolozile iye ekuhlaziyweni. Imiphumela izobulala ibhalansi ye-akhawunti yakho. Kuzofanele uhlaziye futhi ufunde ngesimo ngasinye esenzeka okhethweni ngalunye olumenyezelwe.
Izeluleko eziyi-8 zalesi simo
Ukuba yinkimbinkimbi kwalezi zinqubo zokhetho kuzosho ukuthi kuzofanele ungenise amasu okutshala imali ahluke ngokuphelele kunamanye wokuzivocavoca. Ngokusebenza okusheshayo, kepha ngasikhathi sinye kucatshangelwa kakhulu. Ngeke ukwazi ukuthonywa yimizwa, ingasaphathwa eyimibono engenasisekelo. Akukho okungcono kulawa macala, kunokufeza ezinye zezincomo ezilandelayo esikuvezela zona ngezansi.
Zama ukuthola imikhiqizo eyiyo kuxhunyaniswe nokuguquguquka ukukusiza unqobe izithiyo eziningi ezisondele kulo msebenzi okhetheke kakhulu. Enye yazo ingenza kube semthethweni ngokusebenzisa izimali zokutshala imali ngokuya ngalesi sici sezimakethe zezimali.
Imisebenzi yakho yemakethe yamasheya kufanele iqondiswe kakhulu isikhathi esifushane, njengecebo elilodwa lokwenza imali oyongile ibe nenzuzo ngendlela ephumelelayo nevimbelayo.
Ngokuqinisekile zizovela ngo-2017 amathuba ebhizinisi. Okuwukuphela kokunye ongakusebenzisa ngokunenzuzo kuzoba ukugcina imali eyanele ku-akhawunti yakho yokuhlola ukubhekana nokusebenza kwezimali.
I-Los amanani wokuphephela zizoba enye yezindlela ongakhetha kuzo ukwenza ukonga kube nenzuzo. Uzoba nazo hhayi emakethe yamasheya kuphela, kodwa nangezinye izimpahla zezezimali. Ikakhulukazi igolide, okuyilapho inhlokodolobha enkulu ngokwesiko ibalekela kulezi zimo zokungazinzi.
Ungazami ukushesha kakhulu ezimakethe zamasheya ngoba uzokwazi ukukhokha kakhulu lapho ungalindelanga, futhi ngenxa yeminye yemiphumela eyenzeka kulolu khetho olubaluleke kakhulu eYurophu.
Musa ukwenza imisebenzi ngaphansi kweminikelo yemali kukhulu ngokweqile. Kepha kunalokho, kuzodingeka ubakhawulele ukuvikela izimpahla zakho ezikhathini ezingezinhle kakhulu kulo nyaka.
Ngaphambi kokwenza noma yikuphi ukutshalwa kwezimali kuzodingeka ukuthi hlola lonke ulwazi sikuphi isimo sezikhwama. Ukuze ugweme ukwenza isinyathelo esingalungile esingadala ukulahleka okukhulu.
Okokugcina, ungakhohlwa bhala ku-ajenda yakho izinsuku okuzobanjwa ngazo lolu khetho esikhulume ngalo. Kuzoba isilinganiso esiwusizo kakhulu ukuhlela utshalomali lwakho esivivinyweni esizoba nzima kakhulu kubo bonke abonga.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Inqubomgomo izodayiswa esidlangalaleni ngonyaka we-2017
Yini engalindelwa emakethe yamasheya kumongameli kaTrump?